» निर्माण सुरु भएको ६२ वर्षपछि अब कान्ति लोकपथमा ठूला सवारी चल्ने, हेटौँडाबाट सात दोबाटो केबल ९० कि.मि.
निर्माण सुरु भएको ६२ वर्षपछि अब कान्ति लोकपथमा ठूला सवारी चल्ने, हेटौँडाबाट सात दोबाटो केबल ९० कि.मि.
२०७५ बैशाख १५,शनिबार १२:४८
काठमाडौं, १५ वैशाख । हेटौंडा-काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्गका रुपमा निर्माणाधीन कान्ति लोकपथमा आगामी कार्तिकबाट ठूला सवारी गुड्ने भएका छन् । झण्डै ६ किलोमिटर खण्डमा वान-वे सवारी पास हुने गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । निर्माण शुरु भएको ६२ वर्षपछि पूर्णता पाउने अन्तिम चरणमा रहेका बेला बिष्फोटक पदार्थ अभावले समस्यामा परिरहेको आयोजनाका प्रमुख देबेन्द्रप्रसाद साहले बताए । मार्ग विस्तारका लागि कडा चट्टान फुटाउन विष्फोटक पदार्थ अभाव भएपछि आगामी कर्तिकसम्ममा काम सकिएका खण्डमा कालोपत्रे सक्दै सडक खुला गर्ने तयारी गरिएको साहले बताए ।
सडक साँघुरा भएका खण्डमा बस ट्रक एकतर्फी चल्न सक्ने बनाएर कार्तिकबाट सञ्चालनमा ल्याउने उनको दावी छ । अहिले चट्टान फोर्न बाँकी खण्डमा साना सवारीभने सहज रुपमा आवात-जावत गर्न सक्छन् । नेपाली सेनाले दुई वर्षअघि नै पाँच टन विष्फोटक पदार्थ दिने सहमति जनाएको थियो । तर, अभाव भएको बताउँदै सेनाले अझै विष्फोटक पदार्थ दिएको छैन । ‘हामीले विष्फोटक पदार्थ पाएनौं । त्यसैले अब साँघुरो सडक भएका स्थानमा वान-वे सवारी चलाउन सकिने गरी कार्तिकसम्म सडक खुला गर्छौं,’उनले भने । उक्त लोकपथका विभिन्न खण्डमा अहिले ठूला चट्टानको अवरोध छ । ती चट्टान हटाएर सडक विस्तार गर्दै कालोपत्र गर्ने योजना थियो । अहिले चट्टान हटाउने काम छुट्टै प्याकेजमा राखेर काम सडक खुला गर्ने गरीकाम भइरहेको छ ।
आयोजना अन्तरगत अहिले १३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म मकवापुरतर्फको १६ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सकिएको छ । अब मकवाननपुरतर्फ ३५ किलोमिटर खण्ड पिच गर्न बाँकी छ । ललितपुरतर्फको डेढ किमि पनि कालोपत्रे भएको छ । ट्र्याक खुलेको ६० वर्षपछि हेटौंडातर्फबाट यो मार्गमा कालोपत्रे शुरु भएको थियो । यो मार्ग निर्माण भएपछि हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने दुई सय २६ र पालुङ हुँदै आउने एक सय २६ किमि सडकको विकल्प तयार हुनेछ । यो मार्ग बनेपछि काठमाडौंसम्म ठूला सवारीले सहज रुपमा आवागमन गर्नसक्ने छन् । कान्ति लोकपथमा स्तरीय मानिने ‘अस्फाल्ट पिच’को प्रयोग गरिँदैछ ।
काठमाडौंबाट कान्ति लोकपथको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको सातदोबाटो हो । आयोजनाका लागि यो वर्ष ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हेटौंडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म ९० किमि लम्बाइको छ, यो मार्ग, जसलाई साढे आठ मिटर चौडा बनाइनेछ । र, दुई लेनमा गाडी चल्ने गरी सात मिटरमा कालोपत्रे गरिँदैछ । कान्ति लोकपथको ट्रयाक ०१३ सालमा खुलेको थियो । शुरुमा एक लेनको यो सडकमा ०१६ सालदेखि गाडी चल्न थालेका थिए ।
तर, ललितपुर र मकवानपुरको सीमास्थित वागमती नदीमा पुल नबनेको र सडकको दुरावस्थाका कारण सवारी चलाउन अयोग्य रहँदै आएको थियो । ६० वर्षपछि मात्र उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा परेको थियो । यस मार्गलाई मकवानपुर जोड्ने दक्षिणकाली-सिस्नेरी सडक र त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रुपमा पनि लिइएको छ । छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल र भारतबीचको व्यापार विस्तारमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ । त्यसबाट काठमाडौंको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुनेछ ।